Fotodrafitrasa vaovao : narenin’Ambatovy ny biraon’ny distrikan’i Moramanga | NewsMada
Fotodrafitrasa vaovao : narenin’Ambatovy ny biraon’ny distrikan’i Moramanga
Natolotr’Ambatovy, omaly 3 novambra, ireo trano roa no vita fanarenana ho an’ny distrikan’i Moramanga. Nahafahana nanatanteraka ny fanarenana ireo trano ireo ny fiaraha-miasa amin’Ambatovy sy ny distrikan’i Moramanga. Tsiahivina fa rava vokatry ny fandalovan’ny rivodoza roa, ny volana febroary sy marsa 2012, ireo trano ireo. Namatsy vola manontolo ny asa Ambatovy; niantoka ny fandrodanana ireo trano tranainy, ny fandaniana nifandraika tamin’izany, ny fanadihadiana ny tetikasa ary ny fanaraha-maso ny asa ny distrika.
“Natao ho an’ny vondrom-piarahamonina ity tetikasa fanarenana ny trano roa mifanila amin’ny biraon’ny distrikan’i Moramanga ity, izay mitentmi-bidy 95 tapitrisa Ariary mahery. Ahafahan’ny rehetra misitraka ireo tolotra eo amin’ny lafiny raharaham-panjakana tsara kalitao izany”, hoy ny filoha lefitra misahana ny fandrosoana lovainjafy ao Ambatovy, Philippe Beaulne.
Handraisana ireo “Services techniques déconcentrés” (STD) isan-karazany sy ireo mpiasan’ny boriborintany ihany koa, hanamoràna ny asan’ireo mpiasam-panjakana, no sady entina hanatsarana ireo tolo-draharaha ho an’ny olom-pirenena. Isan’ireo ho fandraisana anjara eo amin’ny sehatra sosialy, ho fampandrosoana ny manodidina, ny fisian’ny fotodrafitrasa ho an’ny vondrom-piarahamonina mampiantrano ny orinasa toy izao.